बर्दिबासमा समाजको हिरासतमा रहेको एउटा भव्य घरको कथा
मंगलबार, असार २१, २०७९ ०८:४८:४१ युनिकोड
आइतबार, मंसिर २६, २०७८ जनता नेपाल
महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिका–१४ स्थित सुभम बस्तीमा जाने गल्लीको अली पर पुगेपछि दायाँतर्फ देखिने एउटा भव्य घरले जोकोहीलाई झसङ्ग बनाउँछ । घर नजिकै गएपछि भित्र खरानी नै खरानी छ । मानाैँ यो मुर्धाघर हो, जहाँ दाहसंस्कारको लागि यही घरलाई प्रयोग गरिन्छ । अगाडिपट्टी दुईवटा सटर छन् । सटरभित्र जलेका बोतल र सिसाहरू देखिन्छन् । दिउँसै अँध्यारो र भग्नावशेष देखिने यो घर किन यति डरलाग्दो छ ? बस्तीको बीचमा पनि यो घरले ’roundका मानिसलाई त्रसित बनाइरहेको ? यो घरबाट आवतजावत गर्ने जोकोहीमा यस्तै विभिन्न प्रश्न उब्जन्छ ।
करिब १० धुर जग्गामा बनेको यो घरको अगाडि र पछाडि अपराधीको घर हो भनेर लेखेको देखेपछि साहसँगै यो घरले पनि उस्तै सजाय भोगिरहेको छ ।
साहको अपराधको कारण उनको परिवारका सदस्यसमेत विस्थापित भएका छन् । घरको प्रत्येक तल्लामा स्थानीयहरूले आगजानी गरेको खरानीका थुप्रोबाहेक केही छैन । साहले घरमा किराना पसल राखेका थिए ।
अपराध गर्ने जोकोहीले कानुनको भागीदार मात्र हैन सामाजिक आक्रोश र सामाजिक सजायको पनि भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, यो घर ।
समाजको आक्रोश यसरी स्थापित भयो कि मानौँ साहको सम्पती, जग्गाजमिन, परिवार, सम्पुर्ण साहलाई अपराधमा उत्प्रेरित गर्ने तत्वहरू हुन् । अपराधीलाई समाजले नै सजाय दिन पाउनुपर्ने भन्दै एक वर्षअगाडि बर्दिबास रणभूमिमा परिणत भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २६, २०७८, २१:२४:००